ဒါတွေဖတ်မိရင် အပြာကား ကြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
27 May 2017 . 11:33 AM
ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် လူငယ်နဲ့အပြာကားဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရတော့ပါဘူး။ အပြာကားမကြည့်ဖူးတဲ့လူဆိုတာလည်း နှင်းဆီနက်ထက်တောင် ရှားပါသေးတယ်။ အပြာကားတွေကို သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ Zapya နဲ့ Share ကြတဲ့သူတွေရှိသလို Online ကနေလည်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ကြတဲ့သူတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ အပြာကားအသစ် ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Online မှာ အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ဖြစ်နေလိုက်တာ မြင်မကောင်းပါဘူး။ ဖုန်းထဲမှာ အပြာကားမပါရင်ကို ခေတ်မမီသလိုဖြစ်နေပါပြီ။ အပြာကားကို ကြည့်နေကျလူတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းကို တွေ့တာနဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်ပါသေးလားလို့မေးတာလည်း ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။
နာမည်ကျော်အပြာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကလည်း ကြည့်ရှုသူများဖို့အတွက် ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ဆွဲဆောင်နေကြပါသေးတယ်။ အပြာကားကြည့်တာက ခရီးသွားဟန်လွှဲလိုသာ ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ဒါကိုကြည့်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိသွားတဲ့အဆင့် (စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်) ရောက်သွားရင် မကောင်းတော့ပါဘူး။ အပြာကားစွဲသွားရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးအပိုင်းမှာ ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အပြာကားကြည့်ဖန်များလာရင် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသလို ဦးနှောက်ကျုံ့လာနိုင်တယ်လို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာ အပြာကားကြည့်တာနဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာရုံမက လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုအပိုင်းမှာ လျော့ကျလာပါတယ်။ အပြာကားစွဲလမ်းလာတဲ့လူတွေက ကိစ္စတစ်ခုကို အလွယ်တကူနဲ့ အရှုံးပေးလိုစိတ်ဝင်လာကြပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်း အမြင်မကြည်သူများလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ထက်သန်မှုလျော့နည်းလာပြီး ဦးနှောက်ထိုင်းမှိုင်းလာတဲ့အတွက် အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်း (Dopamine Level) မြင့်တက်လာရပါတယ်။ အပြာကားစွဲလမ်းလာတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာ အကူညီပေးတဲ့ ဦးနှောက်ရှေ့အဖု (Frontal Cortex) ဟာ မညီမမျှဖြစ်လာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားယွင်းလာတတ်ပါတယ်။ သမီးရည်းစားအကြားမှာလည်း အဆင်မပြေဖြစ်လာပြီး လုပ်သမျှလွဲလာတတ်ပါတယ်။
ကဲ . . . လူတိုင်းဟာ ကာမတဏှာနဲ့ မကင်းနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် ဘယ်အရာမဆို လွန်ကဲလာရင် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ သလဲသီးလေးတွေ အကန့်ခွဲထားသလို ကိစ္စတိုင်းမှာလည်း သူ့အကန့်လေးနဲ့သူ ခွဲခြားထားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေချောမွေ့နေမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆေးစွဲသလို အပြာကားစွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မဖြစ်သင့်တန်မဖြစ်ရအောင် mention ခေါ်ပြီး အချိန်မီတားလိုက်ဦးနော်။